कृष्णसेन स्मृति दिवस access_time4 months ago
'वैचारिक हिसाबले कडा र व्यवहारिक पक्षमा लचक व्यक्ति अहिले पनि पाउँन सकिन्न । व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उहाँले कहिल्यै लड्नु भएन । सेन जस्तो सिद्धान्तमा दृढ र व्यवहारमा अत्यन्तै लचिलो मानिस भेटिदैन'
भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध जुध्न अभिप्रेरित गर्ने ऊर्जाशील गीतहरु (भिडियोसहित)
भारतीय विस्तावादले वर्षौदेखि नेपाली भूमिमा आफ्नो सेनालाई परेड खेलाइ रहेको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको नेपाली भूमिलाई समेटेर सरकारले साहसपूर्वक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार, कलाकार, नेता, कार्यकर्ता सबैले सरकारको कदमको प्रशंसा गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको यो कदमले भारतमा भने खैलाबैला मच्चिएको छ ।
लामो समयदेखि चल्दै आएको भारतसँगको सीमा बिबाद समाधानबारे भूगोलबिद् स्वर्गिय डाक्टर हर्क गुरुङले ४७ वर्षअघि नै अध्ययनसहित सुझाव दिएका थिए ।
मातृभाषाहरुलाई कमजोर बनाउने योजनासहित कक्षा १ देखि नै संस्कृत पठनपाठन गराउने योजना बनेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले आरोप लगाएका छन् ।
सरकारले भारतसँगको सीमा विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण नगर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले हालै जारी गरेको नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका ३ डप्खामा आज साँझ भएको आगजनीबाट एक घर जलेर नष्ट भएको छ ।
३५ हजार ४९४ जनाको पिसिआर परीक्षण, २३ हजार २०२ जना क्वारेन्टाइनमा
कोरोना भाइरस संक्रमण शंकामा पिसिआर विधिबाट ३५ हजार ४९४ वटा नमुना परीक्षण भएका छन् । यस्तै, आरडिटी विधिबाट ७५ हजार ७२ वटा परीक्षण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक (भिडियोसहित)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले सबैले आज सार्वजनिक नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेकी छन् । नेपालको क्षेत्रफल अब १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ बाट बढेर १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ ।
बाघलाई अगाडि देखेपछि बाइकमा सवार युवा यसरी लडे भुँइमा ! (भिडियोसहित)
भारतको मध्य प्रदेशको पन्ना जिल्लामा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल बनेको छ । जसमा एउटा बाघ र मोटरसाइकलमा सवार आमने सामने भएका देख्न सकिन्छ । लकडाउनकै समयमा बाघ राष्ट्रिय राजमार्ग ३९ मा मोटरसाइकलमा सवार युवक नजिकै आइपुग्यो ।
पहिलोपटक सिन्धुलीका एकजनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
सिन्धुलीमा पहिलोपटक एक जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
आज विभिन्न जिल्लाका २७ जना थपिए : संक्रमितको संख्या ४०२ पुग्यो
विभिन्न जिल्लामा आज २७ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ ।
२४ घण्टामा दुई हजार ५५८ जनाको पिसिआर परीक्षण, सात जिल्लाका ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि
कोरोना संक्रमणको शंकामा पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ५५८ पिसिआर परीक्षण भएको छ । तीमध्ये ६२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
लकडाउनको ५४औं दिन आज, लकडाउन थपिने सम्भावना
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि जारी गरेको लक डाउनको ५४ दिन पुगेको छ ।
नेपाल आमालाई बचाउन अमरसिंह र बलभद्र बन्न आव्हान गरिएको गीत (भिडियोसहित)
भूकम्पले हामी थिलोथिलो परेका बेला नाकाबन्दी लगायो । अहिले कोरोना भाइरसको कहरले तड्पिरहेका बेला हाम्रो लुपुलेक क्षेत्रमा मोटरबाटो बनाइ उद्घाटन गर्यो । रोजगारीका लागि भारत पुगेका नेपालीलाई नेपालको सीमा क्षेत्रमा ल्याएर अलपत्र पारिदिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सकिएको छ । बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भएको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ 'प्रकाश'ले जानकारी दिए ।
स्थलगत रिपोर्ट : 'सिल गरिएको सिन्धुलीको भिमान- आत्तिनु पर्दैन, कोरोना परीक्षण हुँदैछ’ (भिडियो)
संक्रमण पुष्टि भएसँगै बुधबार (हिजो)बाट यहाँको प्रहरीले भिमान चोक भित्रका संक्रमित महिलाले खाना खाएको स्थानका साथै आसपासको क्षेत्रलाई सिल गरेको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा जडान भयो ‘ट्रम्प डेथ क्लक' : यस्तो छ कारण ! (भिडियोसहित)
अमेरिकाको न्युयोर्क संसारमै कोरोना प्रभावित सहरमा पहिलो नम्बरमा आउँछ । अमेरिकामा औपचारिक तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ८५ हजार १९७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यसमध्ये २७ हजार २ सय ९० जना न्युयोर्कका रहेका छन् ।
वीरगञ्ज महानगर प्रमुख भन्छन्, 'अहिले परीक्षण गर्न सकेमा एक हजार संक्रमित भेट्छौँ' (भिडियोसहित)
कोरोनाको इपिसेन्टर वीरगञ्ज access_time4 months ago
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र कोरोना भाइरसको संक्रमणमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित भएको क्षेत्र हो । बुधबारसम्म महानगरभित्र ८२ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । आरडिटी टेष्टमा नेगेटिभ देखिएर ढुक्क भएका थियौँ । त्यो त कामै रहेनछ । आरडिटी नेगेटिभ देखिएकाहरुमा पिसिआर टेष्ट पोजेटिभ देखियो ।
स्पेनिस फ्लू जितेकी ११३ वर्षकी यी महिलाले जितिन् कोरोना भाइरस (भिडियोसहित)
स्पेनकै जेष्ठ महिलाले कोरोना भाइरसलाई जितेकी छन् । १ सय १३ वर्षीया मारिया ब्रानयसले कोरोना भाइरसलाई जितेको बिबिसीले जनाएको छ ।
यसरी मनाइयो शताब्दी पुरुष जोशीको जन्मदिन (भिडियो)
जोशीले नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । जोशीको जन्मदिनका अवसरमा विभिन्न व्यक्ति, समुदायले शुभकामना दिएका छन् ।
महिला पत्रकारको प्रश्नमा रिसाएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प 'प्रेस ब्रिफिङ'बाट यसरी बाहिरिए (भिडियोसहित)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा आयोजित कोरोना भाइरस प्रेस ब्रिफिङबाट रिसाएर बाहिरिएका छन् । वाइजा जियाङ नामक महिला पत्रकारको प्रश्नको उत्तर नै नदिएर चीनलाई गाली गर्दै उनी निस्किएका हुन् ।
कोरोना संक्रमितमध्ये ३३ जना उपचारपछि डिस्चार्ज
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका ३३ जना डिस्चार्ज भएको जनाएको छ । नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले अहिलेसम्म ३३ जना डिस्चार्ज भएको जानकारी दिए ।
संसद : कवितामै गरे गगन थापाले प्रधानन्त्री ओलीको आलोचना (भिडियो)
सांसद गगन थापाले संसदमा कविता वाचन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूको माग (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट युवा-विद्यार्थी संगठनले सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूले संयुक्तरुपमा सरकार समक्ष यस्तो माग राखेका हुन् । दुवै संगठनले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सीमानामा काँडेतार लगाएर सुरक्षाफौज राख्न माग गरेका छन् ।
पछिल्लो २४ घन्टामा १३ सय बढीमा कोरोना परीक्षण : स्वास्थ्य मन्त्रालय
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले पछिल्लो २४ घन्टामा १ हजार ३ सय भन्दा धेरैको कोरोना परीक्षण गरेको छ ।
चीन र भारत दुवै देशसँग सीमा समस्यामा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : शशांक कोइराला (भिडियोसहित)
नेपाली काँग्रेसले चीन र भारत दुवै देशसँग सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले नेपालको भूभाग एक इन्च पनि अतिक्रमण हुन नदिन भारत र चीनसँग कुटनीतिक पहल गरी टुंगोमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सीमा अतिक्रमणबारे बोले प्रचण्ड, ‘सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्छ’ (भिडियोसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा सरकारले अपनाउने कुटनीतिक पहल ठीक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
माइतीघरबाट प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग (भिडियोसहित)
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीमा सडक बनाएको विरोधमा माइतीघरमा प्रदर्शन गरिएको छ । भारत सरकारको उक्त कदमविरुद्ध प्रदर्शन गर्न माइतीघर पुगेका युवाहरुको समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनमा माग गरेको छ ।
भारतीय दूतावासमा प्रदर्शन गर्न गएका विद्यार्थी प्रहरीको नियन्त्रणमा
नेपाली भूमित अतिक्रमण गरेको भन्दै भारतीय दूतावास प्रदर्शन गर्न हिँडेका विद्यार्थीहरू पक्राउ परेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपाएको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियूका नेता तथा कार्यकर्ताहरु शनिबार भारतीय काठमाडौंको लैनचौरस्थित दूतावासमा प्रदर्शन गर्न गएका थिए ।
सुन्दर सिन्धुली : हेर्नुहोस विज्ञान श्रेष्ठको भिडियोग्राफी
बङ्गलादेशको जल्लाहबादमा एमबीबीएस अध्ययनरत सिन्धुलीका विज्ञान श्रेष्ठ अहिले बिदामा घर आएका छन् । यो विदाको मौकामा उनले सिन्धुलीलाई चिनाउने भिडियोग्राफी तयार पारेका छन् ।
नेपालगञ्जमा थप एकजनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या १ सय २ पुग्यो
बाँकेको नेपालगञ्जमा थप एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । नेपालगञ्जका १६ वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
नेपालमा अहिलेसम्म ५४ हजार भन्दा धेरै आरडिटी परीक्षण (भिडियोसहित)
स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन access_time4 months ago
सरकारले नेपालमा अहिलेसम्म ५४ हजार ९३ जनाको आरडिटी परीक्षण गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा १ हजार ४ सय ५१ वटा परीक्षण भएपनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन ।
पर्साको वीरगञ्जमा थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण : संक्रमितको संख्या ९९ पुग्यो
कोरोना भाइरसको संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । आज पर्साको वीरगञ्जमा थप १७ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । संक्रमितको संख्या ९९ पुगेको छ ।